FAQs - Beijing Multifit Electric Technoloty Co., Ltd.
Ma tahay warshad ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay warshad. Multifit Solar waa soo-saare asal ah oo nakhshad ka sameysa koronto beddeleysa, kantaroolaha qarashka qoraxda iyo qoraxda
sanduuqa array ilaa 2009.
Xagee ku taal warshadaada? Sideen ku booqan karaa halkaas?
Warshadahayadu waxay ku yaalaan BeiJing iyo Shantou City, Guangdong, Shiinaha. Waxay qaadataa nus saacadood garoonka diyaaradaha ama Saldhigga tareenka. Ku soo dhawoow inaad booqato horumarinta tignoolajiyadayada iyo khadadka wax soo saarka wakhtigaaga firaaqada!
280768 Suuqa Kala iibsiga
20+ CE Shahaadooyinka
20+ Alaabta Patent
12+Sano ee Warshadaha Qoraxda
80+ Wadamo Dhoofinta
Kooxda injineernimada xirfadlayaasha ah waxay horumariyaan tignoolajiyada cusub.
Waxaan bixinaa adeegyo kala duwan
2-Wasaarada tooska ah
3-Jawaab degdeg ah
Nidaamyada Solar Pv Systems
Ka baxsan khadka si aad ula kulanto shuruudaha doorashada maalinlaha ah, Shabakadda dhexdeeda si aad u badbaadiso tirada badan ee lacagtaada.
Qorraxda Adeeg ahaan
Qorraxda adiga kugu habboon dhammaantiin
Isla dhoola cadeynta sida iftiinka qoraxda, si uu kuugu keeno cagaar iyo sidoo kale farxad